Umkhiqizi we-PWM we-Solar Card Controller unikeza isilawuli se-Pwm Solar SOLAR
Ikhaya > Imikhiqizo > Pwm solar controller
Isilawuli sohlelo lwe-off-grid solar futhi silawule ukushaja kanye nokukhipha ibhethri. Inqubo yokushaja ehlakaniphile yenzelwe isikhathi eside ...
I-ODHOW ukusetha i-voltage voltage rectage voltage (LvR)?
Od 设置 - 欠压 恢复.Lo mkhiqizo omkhulu kamnandi uzokwengeza isitayela se-classic nobudala egumbini lokulala, unikezela induduzo yesizini yonke.Chofoza lapha ukulanda idatha
I-Odhow efanele ukusetha i-voltage voltage volconpect voltage (LVD)? abakhiqizayo
I-Odhow efanele ukusetha i-voltage voltage volconpect voltage (LVD)? abakhiqizi.Zonke izinqubo zokukhiqiza ezihambisana namazinga okukhiqiza i-Hardware zombili ezakhishini zasendlini nakwamanye amazwe, kufaka phakathi izinqubo zokuxuba nezinqubo ze-welding.Chofoza lapha ukulanda idatha
I-China kanjani ukusetha ihora lokulawula ukukhanya nesikhathi? Abakhiqizi -
I-China kanjani ukusetha ihora lokulawula ukukhanya nesikhathi? abakhiqizi -.Lo mkhiqizo uyakwazi ukuthuthukisa ikhwalithi yokulala ngoba imelana kahle nomswakama, ivimbela ukungezwani, futhi ingasetshenziswa iminyaka.Chofoza lapha ukulanda idatha
I-PWM solar coundller-od30s Od40S Incazelo Yomkhiqizo
I-PWM solar coundller-od30s Od40S Incazelo YomkhiqizoUchungechunge lwe-Ocean Dream (OD ngamafuphi) luyisilawuli sethu esisha se-PWM Solar. Ukukhethekile kwayo kulele kuma-CPU angama-32 angaphakathi, anika amandla abalawuli ukuthi basebenze ngokushesha nangokuzinza kakhulu. Yakhe i-4USB Port kanye ne-Screw Driver ngaphakathi.Besusides, Omnyama Wethu Omnyama&I-Red Big terminals Design yenza ukuxhumana kwakho kuhlelo lwangempela. Igobolondo lepulasitiki elimhlophe leqhwa linemvelo kakhulu noma ngabe libekwe kuphi ekhaya lakho noma kwi-RV.Kule vidiyo, sizokwethula imininingwane yokubukeka kwe-OD Series Solar ControllerChofoza lapha ukulanda idatha